डाक्टरहरुले पनि आत्मरक्षाका लागि कराते सिक्नुपर्‍यो - समय-समाचार
डाक्टरहरुले पनि आत्मरक्षाका लागि कराते सिक्नुपर्‍यो
समय-समाचार आईतबार, २०७७ असार २१ गते, ०३:२८ मा प्रकाशित
काठमाडौं । झापाको बिर्तामोडस्थित मेडिकल कलेजमा कार्यरत डाक्टरमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा आइतबार (आज) माइतीघरमा प्रदर्शन गरिएको छ ।
माइतीघरमा भेला भएका चिकित्सकहरूले कोरोनाको महामारीमा पनि जोखिम मोलेर काम गरिरहेका डाक्टरमाथिको आक्रमण अमानवीय रहेको बताएका छन् । प्रदर्शनमा सहभागी चिकित्सकहरूले डाक्टर भगवान होइन, बुद्धिले भ्याएसम्म काम गर्ने हो, डाक्टरले जानेर गल्ती गर्दैन, तर डाक्टर माथि जाइलाग्ने कार्य बन्द हुनुपर्ने भन्दै नाराबाजी गरेका थिए ।
माइतीघरबाट नयाँ बानेश्वरसम्म र्यालीसहित प्रदर्शन गरिएको थियो । असार ११ गते झापाको मेडिकल हस्पिटलमा कार्यरत मेडिकल अफिसर डा. सुधाकर झामाथि बिरामीका आफन्तहरूले हातपात गरेका थिए ।
बिर्तामोड नगरपालिका ६, बुट्टाबारीका ८ वर्षीय विज्ञान राईको हात भाँचिएपछि उपचारका लागि राति ८ बजे अस्पताल लगिएको थियो । अस्पतालका अनुसार बालकको हातको अप्रेसन गरिएको र अवस्था सामान्य थियो । डा. झाले बिरामीका आफन्तहरूलाई अस्पतालमा हल्ला नगर्न र मास्क लगाउन भनेका थिए । तर बिरामीका आफन्तले सोही कुरालाई लिएर हातपात गरेका थिए ।